Maxamed bin Salman iyo mustaqbalka jiritaanka Boqortooyada Sacuudiga | dhanaanmedia.com
Maxamed bin Salman iyo mustaqbalka jiritaanka Boqortooyada Sacuudiga
November 8, 2017 // admin1 // News1929 Views
Dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga ahna wasiirka difaaca Maxamed bin Salmaan ayaa ku dhaqaaqay talaabooyin aan horay uga dhicin boqortooyada Sacuudiga kuwaas oo qaarkood khatar ku ah jiritaanka iyo xasiloonida boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Waa markii ugu horeysay taariikhda qooyska reer Aala Sacuud uu boqor xilka ku fadhiya wiilkiisa umagacaabo dhaxalsugaha iyadoo ay joogaan amiiro ilma Cabdulcasiis ah iyo kuwo ay sii dhaleen oo isaga ka da’ weyn kana waaya aragsan.
Talaabooyinka uu ku dhaqaaqay ee wax udhimaya xasiloonida iyo midnimada qooyska reer Aala Sacuud waxaa kamid ah:
Inuu shaqadii ka eryay xabsigana dhigay laba amiir oo uu dhalay boqorkii aabihii xukunka ugua horeeyay Cabdullah bin Cabdulcasiis oo sida la sheegayo uu arko in dhankooda ay kasoo wajihi karto tartan awoodeed.
Inuu xabsiga dhigay 9 amiir oo kale dhaqaalahoodiina uu xanibay.Amiiradan xabsiga la dhigay waxaa kamid ah Alwaleed bin Talaal oo ah nin bilyan dheer ah.
Inuu ka talaabsaday dhaqankii soo jireenka ahaa ee boqortooyada Sacuudiga dalka ku maareyn jirtay kaas oo ku dhisnaa wada tashi,xurmo iyo isxeerin qooyska dhediisa ah
Inuu durbaanka utamayo dagaal ka dhex dhaca Sacuudiga iyo Iraan isagoo isku haleenaya Mareykanka iyo Israel iyadoo la wada ogyahay in dalka Iran uu yahay dal leh awood militari oo burburin karta xasiloonida boqortooyada Sacuudiga.
In Riyaad uu ku qaabilay Jared Kushner oo ah wiilka uu sodoga uyahay Donald Trump kana mid ah la taliyaashiisa.Kushner wuxuu asal ahaan kasoo jeeda Israel wuxuuna u ololeeyaa arimaha Israel.Kulankan ayaa la sheegay inuu gaadhay afartii habeenimo.
Inuu xidhay culimadii diinta Islaamka shaaciyayna in Sacuudiga uu ku soo celin doono dhexdhexaadnimo waxa ay reer galbeedku ugu yeedhaan moderate Islam.
Inuu shaaciyay in dumarku ufasaxyihiin garoomada cayaaraha iyo in maxram la’aan ay baabuur wadi karaan.
Waxaa jira dareen ah inuu aad ugu dhowyahay Israel taas oo khatar gelin karta jiritaanka boqortooyada Sacuudiga